Crosscall Core-T4 mbadamba nkume nile [Nyochaa] | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | 28/03/2021 10:00 | Emelitere ka 31/03/2021 12:45 | General, Nyocha
Anyị na-alaghachi na Actualidad Gadget yana ọdịnaya ịchọrọ, yana nyocha kachasị mma ka ị nwee ike ikpebiri onwe gị ma ọ bụrụ na ọ bara uru ịzụta ngwaahịa ụfọdụ, na oge a anyị lekwasịrị anya na ahịa pụrụ iche, nke ngwaọrụ ultra-na-eguzogide maka ụdị ebe niile, echefula ya.
Ihe ohuru a rutere na tebụl nyocha anyị Crosscall Core-T4, mbadamba ihe dị mgbagwoju anya, juputara na ngwa yana karịa ihe niile na-eguzogide ọgwụ. Chọpụta anyị kedu njirimara ya kachasị mma ma ọ bụrụ na ọ bara uru ịzụta ụdị ngwaahịa a na-elekwasị anya na nguzogide na nkwụsi ike, gịnị ka ị chere?
Dị ka n'oge ndị ọzọ, anyị kpebiri iso vidiyo ọhụrụ a na vidiyo ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ na ọwa YouTube anyị na nke na-eduga nyocha a. N'ime ya ka ị ga-ahụ ebugota mbadamba Croscall Core-T4, nakwa usoro nyocha ndị akọwapụtara nke anyị na-eme ka ị nwee ike nweta echiche nke arụmọrụ ya n'ozuzu, n'ihi na ọ dị mfe iji anya gị hụ ya karịa ka a gwara gị maka ya. Echefukwala ịdenye aha na hapụ anyị a Ohere iji nyere anyị aka ịnọgide na-eto.
1 A imewe chere iguzogide
3 Multimedia na ese foto ngalaba
4 Uru nke ngwaọrụ Crosscall na nnwere onwe
A imewe chere iguzogide
N'ihe banyere imewe, Croscall nwere akara siri ike nke na-eme ka anyị mata ngwa ngwa ihe ngwaahịa ya bụ, na nke a, Core-T4 agaghị adị obere, ọ bụkwa na ọ nwere akara ndị nwere ike ịmata, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere. ngwaahịa ndị ọzọ nke igwefoto. Anyị nwere ngwakọta agwakọta nke gụnyere ihe ndị dara yana yana plastik siri ike na nke na-enye anyị nchebe ọzọ. N'ụzọ dị otú a ọ na-enweta - Asambodo IP68 nwere mgbochi mmiri megide nmikpu nke ihe ruru 2m ruo nkeji iri atọ, yana nchikota zuru oke megide uzuzu.
Ibu ibu: 610 grams
Akụkụ: 225 x 135 x 14mm
B ọhụrụ Crosscall Core-T4 na ọnụahịa kacha mma
N'ihu anyị nwere Ozodimgba iko 3, nke na-enye anyi nguzogide amatara na ntiji. Dị ka ihe bara uru anyị nwere a ma ama etiti na a kpam kpam ewepụghị iko. Nnwale nnwale ya na-ekwe nkwa iguzogide elu nke 1,5 mita n'elu ihe ala na usoro site n'akụkụ niile. N'otu aka ahụ, oke okpomọkụ dị n'etiti -25º na + 50º agaghị emetụta arụmọrụ ya dum. Na mgbakwunye, ọ na-eguzogide mmiri ozuzo na ọbụlagodi mmiri nnu, na-eme ka ọ dị mma, dịka ọmụmaatụ, iji ya dị ka GPS n'ụgbọ mmiri. Na mpụga, ọ dịka ọ nweghị ihe kọrọ ya, mana… kedụ ihe ọ bụ n'ime ya? Ka anyị lee anya.
Otu n’ime ihe ga-eju anyị anya bụ nnukwu ibu ya N'ịtụle ngwakọ nke ngwaọrụ ahụ, mana na-atụle na ọ na-elekwasị anya na ntachi obi, ọ naghị eju anyị anya.
Banyere onye nhazi ahụ, ọzọ anyị hụrụ ebe a nwere ike ịbụ otu n'ime isi ihe ọjọọ ya na RAM, nke ahụ bụ Crosscall nzo na ntinye ntinye na Qualcomm Snapdragon 450, ọ dịkarịa ala, ee, ha adịghị nzọ na MediaTek. Ebe nchekwa RAM nke ga-eso onye nhazi a 3GB, ọ bụ ezie na anyị enweghị data zuru oke banyere ụdị ebe nchekwa ejiri.
Na ọkwa Njikọ anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri DualSIM nke ahụ ga - enyere anyị aka iji Crosscall T4 dịka naanị ngwaọrụ. N'ọnọdụ ahụ anyị nwere njikọta 4G LTE nwere mkpuchi zuru oke dị ka nyocha anyị. Anyị nwere ngalaba ọzọ nke mere ka oyi jụ anyị, nke ahụ bụ na anyị nwere Omenala ac WiFi na Bluetooth 4.1.
Nchekwa 32GB gbasaa site na microSD ruo 512GB
A gam akporo 9 achịcha
Dị ka uru, anyị nwere NFC yabụ anyị nwere ike iji ụzọ nkwụnye ụgwọ enweghị kọntaktị, yana ọdụ ụgbọ mmiri USB-C, nke anyị na-enwebeghị ike ịse vidiyo na ule anyị. Maka akụkụ ya, anyị nwere ekweisi agbakwunyere na ngwugwu na ọdụ ụgbọ mmiri 3,5mm jaak.
Multimedia na ese foto ngalaba
Anyị nwere otu panel 8 inch IPS LCD na WXGA mkpebi, dị ntakịrị karịa HD ma na-enweghị Full HD, ihe na-echebara nha ihuenyo ahụ siri ike nghọta. N'ezie, panel ahụ na-enye ọkwa dị elu dị elu ma nwee agba agba nke ọma, agbanyeghị, mkpebi dị n'okpuru FHD na ngwaọrụ nke ọnụahịa a na-emegiderịta onwe ha. Theda maka akụkụ ya dị mma na-atụle naanị ọkà okwu ya dị na ala. Zụta ya na ọnụahịa kachasị mma na Amazon ma ọ bụrụ na o meelarị ka i kwenye.
Banyere igwefoto anyị nwere 5MP n'ihu, ihe karịrị iji jide oku vidiyo na gburugburu nkịtị, yana n'azụ igwefoto anyị nwere 13MP maka sporadik ojiji, arụmọrụ ahụ dị obere na ọnọdụ ọkụ na-adịghị mma ma ọ nwere ngwa igwefoto dị mfe, anyị na-ahapụrụ gị ụfọdụ ihe atụ:
Chọpụta nkọwa nke otu esi agagharị na vidiyo> JIKERE N’ INLỌ NCHE A
Nke ahụ kwuru, enwere ike ịsị na ahụmịhe ntanetị nwere ezuru, mana igwe ojii doro anya site na ịnweghị ụda stereo na site na mkpebi dị ala nke ihuenyo ya, n'agbanyeghị ọbụlagodi inwe ezi nchapụta enwere ike ịnuri ya n’èzí n’enweghị nsogbu.
Uru nke ngwaọrụ Crosscall na nnwere onwe
Na nke a, na ngwugwu na-agụnye X-Blocker n'azụ nkwụnye ọkụ dakọtara na Ihe njikọ magnetị nke Crosscall nwere. Anyị nwere dị ka batrị nke 7.000 mAh na-enweghị ihe ọ bụla ekwupụtara ngwa ngwa, awade ihe zuru ezu obodo kwụụrụ maka iji ya eme ihe na ọbụlagodi ịnụ ụtọ ọdịnaya nke ọdịnaya na-enweghị oke nsogbu.
Anyị na-ekwusi ike na ngwaahịa a dị ka na Crosscalls niile ike ya "apụ-n'okporo ụzọ", Will gaghị enwe ike ịchọta ngwaọrụ na-eguzogide ọgwụ ma na-agbanwe agbanwe na nkwa ndị Croscall na-enye. Agbanyeghị, dịka ọ dị na mbụ n'ụdị ngwaahịa a, anyị ejirila ngwa ngwa gbochie ngwanrọ maka ịtụle ọnụahịa ahụ, anyị na-atụfu ma ọ dịkarịa ala mkpebi FHD na ihuenyo ahụ, nchekwa karịrị 32GB nke yiri ka ọ pere mpe na 3GB nke nchekwa RAM dị nkenke.
Gụnyere X-eriri: debe mbadamba nkume gị mgbe niile. Akara ubu, nke ezubere iji dozie mbadamba CORE-T4, ejikwa aka ya rụọ ọrụ nke Celsius 360 nke emebere iji mee ihe maka oge niile wee si otú a belata mmerụ ọ bụla. Na mgbakwunye, ekele ya na-abụghị ileghara na padded eriri, ị nwere ike comfortably na-eyi ndị X-STRAP ubu akpa ofụri usen.
Nwere ike ịzụta Crosscall Core-T4 ọhụrụ ahụ site na 519,90 euro na ebe nrụọrụ weebụ ya, ma ọ bụ jiri uru ego enyere na Amazon ebe ị nwere ike ịchọta ya site na 471 na EGO A. Anyị nwere olile anya na ị masịrị nyocha anyị wee hapụ anyị ajụjụ ọ bụla na igbe igbe, ebe anyị ga-enwe obi ụtọ ịzaghachi gị.
Ihe na: 28 March nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 31 March nke 2021
Ike ntachi obi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Crosscall Core-T4 mbadamba ihe nile [Analysis]